Chii chinonzi Gulf | Network Meteorology
Chii chinonzi Gulf?
Iyo geology yenzvimbo iri kuumba pamusoro pemamirioni emakore papasi redu. Zvinokonzerwa nezvikanganiso, kudengenyeka kwenyika, kufambira mberi kwemhepo, mafungu ane simba, kudhonza, kunyorova, nezvimwe. Iwo maitiro eiyo geological ayo anomutsa iwo enzvimbo mafomu atinoona semhedzisiro nhasi. Maumbirwo akaita mabheji, makomo uye capes.
Chokwadi iwe wakaona gomba uye iwe wakambofunga nezve maumbirwo ayo. Iwe unoda kuziva kuti chii chinonzi gulf uye ndeipi nzira yaro yekuumbwa?
2 Tsanangudzo ye bay uye cove
3 Musiyano uripo pakati pegulf, bay uye cove
4 Iwo mapapu anonyanya kuzivikanwa munyika
4.1 Gulf yeMexico
4.2 Gulf ye alaska
4.3 Gulf yeSaint Lawrence
Mukaha inzvimbo inoonekwa nekuve chikamu chikuru chegungwa kana gungwa rakaunzwa muvhu. Iyo iri pakati pemisoro miviri kana maviri peninsula. Iyo gulf inowanzo kuve yakadzika uye ivo vane kukosha kwakanyanya kwehupfumi nekuti, nekuda kwenzvimbo yavo uye nenzvimbo dzenzvimbo, ivo vanoshanda kuchengetedza gungwa kubva kumafungu akakwirira. Izvi zvinofadza kuvakwa kwemachiteshi uye masheve kuwedzera hupfumi hwemahombekombe.
Izwi rekuti gulf rinowanzo kanganisika nemabays kana inlet, zvisinei, iwo haana kufanana.
Tsanangudzo ye bay uye cove
Bay ndiyo inopinda kubva mugungwa kana nyanza iyo rakapoteredzwa zvachose nenyika, kusiyana neiyo gulf, kunze kweimwe yemhedzisiro yayo. Iwo mabhesheni anoumbwa pamusoro pemakore nekuda kwekukukurwa kwemahombekombe uye anotariswa nevanoongorora jogirafi seyemhenderekedzo yegungwa. Mvura iri kuramba ichirova mhenderekedzo uye iri kuumba pamusoro pemakore kugadzira rudzi urwu rwe morphology.
Iwe unogona kuti bay iri inopesana nepeninsula. Ipo peninsula chiri chidimbu chenyika chakakomberedzwa nemvura, kunze kwekumucheto kumwe, bay chidimbu chemvura chakakomberedzwa nenyika, kunze kwekumwe kumucheto.
Munhu wenyama anotora mukana wemabhesi, sekungofanana nemazamu, yekuvakwa kwezviteshi zvekuwedzera hupfumi hwenzvimbo.
Kune rimwe divi, mune jogirafi cove inotsanangurwa senzvimbo yemahombekombe yenzvimbo inoumbwa nenzvimbo yemvura inotora yakatenderera uye inochengetwa nemuromo wakamanikana, kazhinji unogadzirwa nematombo.
Musiyano uripo pakati pegulf, bay uye cove
Sezvo mazwi aya achiwanzo kuvhiringidzika, jogirafi yakagadzira mutsauko pakati pawo. Gulf, bay, uye inlet, kunyangwe iine zvakafanana morphologies, govera mutsauko muhukuru uye kudzika. Neichi chikonzero, gomba iri rekutanga rine saizi yakakura nekudzika, richiteverwa nemabhesi, riri diki zvishoma uye risina kudzika uye richiperera nemakamuri.
Iwo marara akasara kwenzvimbo yekupedzisira, kubvira zvave zvidiki uye zvisina kudzika, pane kuchinjiswa nemahombekombe, anoshandurwa nematombo anobuda mugungwa kubva pagungwa.
Izvo izvi zvitatu geomorphologies zvine zvakafanana ndezvekuti zvakagadzirirwa kuvakwa kwezviteshi kuvandudza hupfumi hwenzvimbo. Zviteshi zvengarava zvinogona kuvakwa zviri nyore, nekuti mvura haina kusimba uye mafomati aya anovadzivirira kubva kumawere emvura.
Uye zvakare, runako rwavanopa kumatunhu, akakosha mapoinzi ehupfumi hwenyika, kwete chete nekuda kwekuvakwa kwezviteshi, asi zvakare zvakagadzirirwa kuve nzvimbo dzinotengeswa zvinhu zvakawanda, vese avo vanouya kubva kune imwe nyika nevaya vanobva, vanowanzo kuve vanotsvaga kwakawanda nzvimbo dzevashanyi, nezvimwe.
Iwo materu, ari madiki muhukuru uye kudzika, haana kunyanyo shandiswa pakuvaka madoko, kunyangwe doko diki dzimwe nguva dzinovakwa, anoshandiswa kushandiswa semabhishi, nekuda kwekuti matombo anovhara mvura uye haatenderi kuti ive nemasaisai kana mafungu ane simba.
Iwo mapapu anonyanya kuzivikanwa munyika
Paunenge uchinge wadzidza tsananguro yegomba uye musiyano nemabays uye inlet, ndiyo nguva yekuwana akakosha uye anozivikanwa mapapu ari pasi. Kune mizhinji mizinda panyika, asi yakakosha pamwero mukuru ndeye Gulf yeMexico, Gulf yeAlaska uye Gulf yeSt. Lawrence.
Gulf yeMexico iri pakati pemahombekombe eMexico (mumatunhu eTamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche neYucatán), iwo mahombekombe eUnited States (mumatunhu eFlorida, Alabama, Mississippi, Louisiana neTexas) nemuganhu kubva kuchitsuwa cheCuba (kumabvazuva kwegungwa, panzvimbo yayo kuenda kuAtlantic Ocean).
Gulf ye alaska
Iyo Gulf yeAlaska inokomberedza nzvimbo yakakombama yePacific Ocean pamhenderekedzo yekumaodzanyemba kweAlaska, yakasungirwa kumadokero neAlaska Peninsula uye Kodiak Island, uye kumabvazuva neAlexander Archipelago kuGlacier Bay. Iyo Gulf yeAlaska yakakura kwazvo mukudzika uye pamwero zvekuti inofungidzirwa segungwa.
Iyo yakawanda mvura inonaya iyo inounganidzwa mukati menguva yekunaya kwemvura muPacific Northwest inoitika mune ino mukaha. Mhenderekedzo yacho yakaoma uye ine masuo akadzika. Kune wese munhu anogona kuenda kunozviona, unogona kunakidzwa nenzvimbo dzemasango, makomo uye echando kubva kumahombekombe nzvimbo.
Rukova rukuru rwunopfuura nemumupata nderweAlaska. Irukova rwuri chikamu chebhandi rekutakura, inodziya hunhu uye inoyerera kuchamhembe.
Nekuda kwemamiriro ayo ekuumbwa uye mamiriro ayo enzvimbo, iyo Gulf yeAlaska inogadzira madutu achienderera. Ichi chinoshamisa chinowedzerwa mukuwandisa uye kusimba munzvimbo dzeArctic Circle, uko madutu anowedzerwa neakawanda chando nechando. Dzakati wandei dzemadutu aya dzinoenda kumaodzanyemba kana mumahombekombe eBritish Columbia, Washington, neOregon.
Gulf yeSaint Lawrence
Iri gapu riri kumabvazuva kweCanada uye rinobatana neAtlantic Ocean. Iri gonhi rakakura kwazvo. Rwizi rweSt. Lawrence runotanga paLake Ontario uye, kuburikidza nechikepe chikuru pasi rose, rinodira muiyi gomba.
Neruzivo urwu iwe unozogona kunyatso kuziva mutsauko uripo pakati pemakomba, bay uye inlet uye uzive akakosha makomba ari pasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Kuparadzanisa » Chii chinonzi Gulf?
Kudengenyeka kwenyika 8,2-kwakazungunusa Alaska, kunokonzera yambiro yetsunami
Iwe unogona sei kubatsira kudzora shanduko yemamiriro ekunze?